Antamedia Internet Cafe 5.4 Full + Video Tutorial ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » Internet Tools » Antamedia Internet Cafe 5.4 Full + Video Tutorial
Antamedia Internet Cafe 5.4 Full + Video Tutorial
By နေမင်းမောင်2:41 AM3 comments
ကျွန်တော့်ကို မေးလ်ထဲကနေ အကိုတစ်ယောက်က Antamedia HotSpot Software ကို တောင်းထား တာလေးရော ပြီးတော့ အသုံးပြုနည်းလေးပါ ရေးပေးဖို့ တောင်းဆိုထားတာ ရှိပါတယ် .. အကိုရေ .. Software လေးကိုတော့ ကျွန်တော် Full Version လေးသုံးလို့ ရအောင် ရှာပေးလိုက်ပါတယ် .. အသုံးပြုနည်းကိုတော့ ကျွန်တော်အနေနဲ့ ရေးပေးဖို့ အခက်အခဲ ရှိတာကြောင့် အဆင်ပြေအောင် Tutorial Video လေးရှာပြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ် .. ဒီကောင်လေးကတော့ ကျွန်တော်တို့ အင်တာနက် ဆိုင်တွေမှာ Sever စက်တွေနဲ့ Client စက်တွေ ကြားမှာ ပိုပြီး ထ်ိထိရောက်ရောက် အသုံးပြုနိုင်ဖို့ အတွက် အထောက်အကူ ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် .. ဒီကောင်လေးနဲ့ Sever ကွန်ပျူတာကနေ အများဆုံး Client Computer 250 အထိ Control လုပ်ပေး နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် .
ဒီကောင်လေးကို ဘယ်လို အသုံးပြုရမယ် ဆိုတာကို ကျွန်တော် အခုတင်ပေးထားလိုက်တဲ့ Video Tutorial လေးကို ကြည့်လိုက်ရင် သဘောပေါက်သွား ပါလိမ့်မယ် .. ဒီ Video Tutorial ထဲမှာ Antamedia HotSpot ကို Sever Computer ပေါ်မှာ ဘယ်လိုအသုံးပြုရမယ် ဘာတွေလုပ်ပေးဖို့ လိုအပ်တယ် ၊ Client Computer ပေါ်မှာ ဘယ်လိုအသုံးပြုရမယ် ဘာတွေလုပ်ပေးနိုင်တယ် စတာတွေကို ဖော်ပြပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ် .. Tutorial Video လေးကို ကြည့်ပြီး အလွယ်တကူ ဆောင်ရွက် တက်သွားလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ် .. ကျွန်တော် Antamedia HotSpot လေးကို Register Version လေးနဲ့ သုံးလို့ရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမယ် ဆိုတာကိုတော့ အောက်မှာ ပုံလေးတွေနဲ့ ပြပေးထားပါတယ် ..
အရင်ဆုံး ကျွန်တော် ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ Keygen လေးကိုဖွင့်လိုက်ပါ .. ပြီးရင်အောက်ကပုံ ပြထားတဲ့အတိုင်း လုပ်ပေးလိုက်ယုံပါပဲ .. Register လုပ်တာကိုတော့ Sever Computer မှာသာမကပဲ Client Computer တွေမှာပါ လုပ်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် ..
Antamedia Internet Cafe 5.4 Full Download
ကျနော်သုံးနေတဲ့ HotSpot ဘဲ။ သိပ်မကျွမ်းကျင်သေးပါဘူးဒါကြောင့် VIDEO လေးကိုယူသွားမယ်ဗျာ။ကျေးဇူးပါဗျာ....လေးစားလျက်
ပြည့်ဖြိုးကျော် March 17, 2012 at 8:43 PM
အရမ်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. . .ကိုနေမင်းမောင်ရေ. . . နောင်လဲ. . စိတ်ညစ်စရာတွေမရှိဘဲ. . .Sharing များများလုပ်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ. . . .
creator May 10, 2012 at 5:14 PM
Antamedia Internet Cafe မဟုတ်ဘဲ Antamedia Hotspt ကို Full Version လေးလိုချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ...။ Configuration လုပ်နည်းလေးကို မြန်မာလိုလေး ပါသိချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ...။ ကျေးဇူးပြုပြီး တင်ပေးစေချင်ပါတယ်...။
WiFi Hack Ultimate AIO (2011)
Uniblue PowerSuite 2012 + Keys
ESET NOD32 LiveCD 4.0.63.0
Adobe Photoshop CS6 13.0 Pre Relse + Keys
OXFORD Picture Dictionary: Vocabulary reinforcemen...
Mens Fitness: 101 Best Exercises Ebook Tutorial
Security Task Manager 1.8d Multilanguage
Winstep Xtreme v11.10
Smart PC Solutions Smart Driver Updater 3.0.0.0
Registry Repair Wizard 2011 Build v6.63
English for Primary Teachers: A handbook of activi...
Hide Folders 2009 v3.9 Build 3.9.1.677
UnCleaner v1.1 - The Unnecessary Files Cleaner Sol...
Internet Tracks Washer v12.0
Surgical Atlas of Orbital Diseases
English to the Max: 1,200 Questions
Calculator Version 2.50
Ashampoo Burning Studio 11.0.2.9 Final Multilangua...
n-Track Studio 6.1.2 Build 2853 (x86/x64) Final
Autumn Forest 3D ScreenSaver & Autumn Forest 3D Wa...
Banner Designer Pro 5.1.0.0 incl Crack
The Java Tutorial: A Short Course on the Basics (4...
အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် .. ။
Basic English Grammar Structure and Vocabulary
PC Today 2011 Full Year Collection
Disk Doctors Photo Recovery v2.0.0.26
Atomix Virtual DJ Pro7Cracked
Hard Drive နှစ်လုံးကို Clone ရိုက်ချင်သူများ အတွက...
Human Physiology, 12th Edition
Basics Animation : Drawing for Animation
HTML5: Your visual blueprint for designing rich We...
Calculator Programs များစုစည်းမှု
ကွန်ပျူတာအမေး အဖြေများ ( E-Book )
Official XP Themes Pack (x86/x64)
MyLanViewer v4.8.9 Cracked
AcCDDVD Label Maker 3.33 + Serial
Keys for PANDA, NORTON, Kaspersky, Dr. Web, ESET N...
RegistryBooster 2012 + Serial
Advanced SystemCare Pro 5.0.0.152 Final + Serial
Driver Compaq Presario 435 For Windows 7
Comment ပေးရတာ အဆင်မပြေသူများအတွက်
Taber's Cyclopedic Medical Dictionary, 20 Edition
မြန်မာစာစနစ်နှင့် OpenOffice 3.0 ကိုအသုံးပြုချင် သ...
Cold2Theme For Window 7
CD-DVD Lock v2.9
Windows7မှာ Virtual Memory Size ကိုတိုးပြီး အသုံ...
Internet Download Manager 6.07 Build 15 + Keygen...
Smart Driver Updater 3.0 + Key
Install Windows7on external usb hard disk ( Mov...
Optitex 9.6 Fashion Design
Rocket Dock For All
ရက် ( ၃၀ ) နဲ့ HTML နဲ့ CSS ကိုသင်ရအောင်ဗျာ.
Windows7Ultimate Live CD 2010 | ISO | ( Update )...
DDR2- DDR3နှင့် RAM များအကြောင်း ( E-Book )
Sothink SWF to Video Converter v2.4 + Serial
ChrisTV Online Premium Edition 6.70 Multilanguage ...
Antamedia Internet Cafe 5.4 Full + Video Tutorial...
Windows နှစ်ခုတင်ပြီး Windows တစ်ခုပဲ ပေါ်နေတယ်ဆိုရ...
Windows7Manager 3.0.3 + Keygen
Drive Letters လေးတွေကို ဖျောက်ပြီး သုံးချင်သူများအ...
SolveigMM Video Splitter 2.5.1111.7 Final + Serial...
An error occured while attempting generate the rep...
Adobe Photoshop CS Portable AIO: CS1/CS2/CS3/CS4/C...
အင်တာနက် ဆိုင်မှာ အသုံးပြုသူများအတွက်
Autorun.inf Virus ကို Command Prompt ဖြင့်ရှင်းရအေ...
Windows ခွေတွေကို Ultra ISO လေးသုံးပြီးအလွယ်ကူဆုံး...
Coolpad 7275 Firmware Download
အသိတစ်ယောက်အတွက် Firmware ကျသွားလို့လုပ်ပေးရင်း အခြားသူငယ်ချင်းတွေအတွက်လည်း လိုအပ်တဲ့အခါရအောင် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်